सपना नदेखेको बाटोमा धुर्मुसको यात्रा
उमेरले ३३ पुगेका धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) श्रीमति सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे)लाई लिएर काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक हुँदै यतिबेला तराई झरेका छन् । महोत्तरीको मुहसर बस्ती निर्माणमा उनी खटिरहेका छन् । पुनर्निर्माण...
माख्लाघरे भाउजु र भ्यालेन्टाइन
भ्यालेन्टाइन डे र नेपालमा यसको महत्व 'मदीराका पारखीहरुले भन्ने गर्दछन आज मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ त्यसैले एक प्याक त नलिई हुन्न’ । वास्तवमा मौसमको के हिम्मत कि मानिसलाई च्यालेन्ज गर्ने । मौसम त प्राक...
मैले रिपोटिङ गर्न नसकेको एउटा कथा
जन्म दिनको शुभकामना दिन फोन गर्दै उपहार के दिउँ भनेर सोध्दा, यसरी डिवोर्स माग्छन भन्ने पत्तै भएन । जेठ ११ गते मैले जव आफ्नो श्रीमानलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन फोन गरें । तव उनले भने, “मलाई जन्मद...
बाहिर निस्किन खोज्यो सेना, रक्षा मन्त्रीले जवाफ दिन सकेनन
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले आगामी निर्वाचनमा सुरक्षाको चिन्ता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र थापाको नेतृत्वमा गएको सेनाका उच्च अधिकारीहरुको टोलीले सरकारलाई आवश्यक परेको चुनावा परि...
अलेक्जेण्डर महान : जसले इरानदेखी भारतसम्म शासन गरे
भारतीयहरुले सिकन्दर र बाँकी बिश्वले अलेक्जेण्डर भनेर चिन्ने पिता फिलिप र माता ओलंपियाको सुपुत्र अलेक्जेण्डर तृतियको जन्म मेसेडोनियाको पेला भन्ने स्थानमा ३५६ बिसि मा भएको थियो । बिश्व बिजयको सपना देख्न...
एमाले छोडेका नेताहरु पुरानै घर फर्किने तयारीमा, यस्तो बन्दैछ सुची !
काठमाडौ । नेकपा एमालेले पार्टी छोडेर अन्य पार्टीमा लागेका नेताहरुलाई पुरानै घर फर्काउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि एमालेले पुरानै घर फर्कन चाहाने नेताहरुको सुची बनाएर उनिहरुसंगको छलफललाई तिब्र बनाएको...
१६ देशका लागि राजदुतको भागबण्डा मिल्यो, को को बन्दैछन् राजदुत ?
काठमाडौ । सत्तारुढ दलहरुबीच राजदुतमा भागबण्डा मिलेको छ । लामो समयदेखी राजदुत रित्त रहेका विभिन्न १६ देशमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपाबीच भागबण्डा मिलेपछी आजै मन्त्रीपरिषद...
काठमाडौं । प्रमुख सत्तासिन दुई दलले प्रहरी महानिरीक्षकको भागबण्डा गरेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा प्रमुख दुईदल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबण्डा गरेका हुन् । जनपद ...
माघ १९ : इतिहासको कालो दिनलाई सम्झँदा
आजको दिनलाई नेपाली इतिहासमा कालो दिनको रुपमा लिने गरिएको छ । आज माघ १९ अर्थात १२ वर्षअघि आजैको दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई दोस्रो पटक बर्खास्त गरी तीन वर्षका लागि आफ्नै हात...
काठमडौं । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधी सकिन केहीदिन बाँकी रहँदा भावी आइजीपीका लागी दौडधुप तिबब्र बनेको छ । तर नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजिपीमा नवराज सिलवाल वन्ने पक्का भएको छ ...
युवा संघमाथी यसरी नै आक्रमण नरोकिए चुप लागेर बस्दैनौँ : सचिव शाही
काठमाडौ । युवा संघ नेपालका सचिव नरेश शाहीले अहिले देशका कतिपय ठाउँहरुमा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुमाथी आक्रमण भैरहेको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । नेपालपाटीसंग कुरा गर्दै सचिव शाहीले ...
काठमाडौं विमानस्थलमा हतियारसहितका भारतीय सेना आए के होला ?
मङ्लबार, माघ १८, २०७३
काठमाडौं । नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत हवाइ रुटका सम्बन्धमा भएको द्धिपक्षिय बार्तामा नेपालको एकमान अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय पक्षलाई एयर मार्सल राख्न दिने सम्झौता भएको बाहिर आयो । त्यसको लगत्तै १३...
जेल पर्न प्रहरीलाई घुस !
आइतवार, माघ १६, २०७३
सामान्य चोरीदेखि ज्यान मुद्दासम्ममा नेपालीहरु विदेशका जेलमा छन् । केहीलाई प्रहरीले विभिन्न आरोपमा समात्ने गरेपनि जानी–जानी जेल पर्नुपर्ने वाध्यतामा भएका नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ । काठमाडौ । कुन...
मधुवन संगालेर जो कर्णबाट धरा हुन खोज्दैछन्
शनिबार, माघ १५, २०७३
जीवनको यो छेउमा आएर मलाई के भएको छ कुन्नि ? केवल तिम्लाई मात्र सम्झिरहेछु “धरा” कस्ती हुँदैछ्यौ अचेल ? यो एउटा महाकाव्य भित्रको पात्रको सम्झना हुनुपर्छ है दाई । अनि अग्रिम बधाई तथा शूुभकामना दा...
चौतर्फी सीप र क्षमताले भरिपुर्ण व्यक्तित्व : चे ग्वेभारा
आदरणीय पाठक तथा दर्शकहरु, नेपालपाटी अनलाइनले सुरु गरेको व्यक्ति परिचय स्तम्भ आज आठौँ अंकमा प्रवेश गरेको छ । हामीले यस स्तम्भमा विश्वभर चर्चामा रहेका तर रहस्यमयी व्यक्तीहरुका बारेमा जानकारी प्रस्तुत...
संविधानको व्यवस्था विपरित बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहाल
एमाले नेता पाण्डे भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री छाडा भए, के कुरा गर्नु !’ स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय रुपमा गराउने तथा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मताधि...
मन्त्रीपुत्र दश करोड कमिशनको चक्करमा फसेपछी…..
सोमवार, माघ १०, २०७३
‘सेटिङमा काम गराउने गरी यो फाइल अगाडी बढेको छ । हामीले यसमा जोखिम मोल्न सक्ने ठाउँ छैन । मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएसम्म हामी टिप्पणी लेख्न सक्दैनौँ भनेका छौँ । तर रोक्न मुस्किल छ ।’ काठमाडौ । उपप्र...
किशोरी शिक्षाको एजेण्डा उठाउने राजनीतिक दल बनाउन चाहान्छिन नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला (वृत्तचित्रसहित)
आदरणीय पाठक तथा दर्शकहरु, नेपालपाटी अनलाइनले सुरु गरेको व्यक्ति परिचय स्तम्भ आज सातौँ अंकमा प्रवेश गरेको छ । हामीले यस स्तम्भमा विश्वभर चर्चामा रहेका तर रहस्यमयी व्यक्तीहरुका बारेमा जानकारी प्रस्तुत ...
सशस्त्रको आईजीपी बन्ने दौडमा को को ?
कठमाडौ । आगामी ३ फागुनमा सशस्त्र आईजीपी दुर्जकुमार राईले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि एआईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठले आगामी एक वर्ष सशस्त्रको कमान्ड सम्हाल्ने निश्चित जस्तो भएको छ ।...
गच्छदारलाई सरकारमा जानबाट रोक्दै रामजनम
उनले भने ‘जबसम्म कैलाली र कन्चनपुर पाँच नम्बर प्रदेशमा गाभिदैन तबसम्म हामीहरु सरकारमा सहभागी हुदैनौँ । यो बटमलाईन हो । ’ काठमाडौ । फोरम लोकतान्त्रीकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानसहित सुुचना त...